Iwo 19+ Akanakisa Rimuru Tempest Makotesheni Anomira kunze! - Zvimwe
19+ Ye Yeakanyanya Rimuru Tempest Quotes Kubva Kubva Tensei Slime!
Rimuru Dutu Chaizvoizvo inotanga seyemhuka chikara. Kutadza kuita zvakawanda kunze kwekutora.
chirungu chinonzi anime chinyorwa nemhando
Kubva pamavambo ekuzvininipisa iye anochinja zvishoma nezvishoma uye anova nesimba rakakura senge anime nhunzi.
Iye anova mutungamiri ane kazhinji kazhinji asina kwaakarerekera, ane musoro maonero ehupenyu. Uye nzira yakanaka yekugadzirisa kupokana.
Izvi ndizvo zvinhu zvinoratidzika mumakotesheni aRimuru, uye zvinodzidzisa zvakakosha zvidzidzo zveupenyu. Nepo mamwe makotesheni achisimbisa iyo inosetsa divi rezvinhu, uye nezvimwe.
Heino runyorwa rweakanakisa.
Rimuru Tempest Quotes:
'Kana zvikaita senge ndakamira hapana mukana ndinotiza ndofunga zano nyowani, asi zvikasadaro, ndinofanira kuona kuti yakasimba sei nemaziso angu, handiti?' - Rimuru Dutu
“Sekudzidza kwawakaita kubudikidza neruzivo, ini ndakasimba! Saka nekudaro, ndinovimbisa kuti ndichakuponesai mose. ” - Rimuru Dutu
'Tora hard drive kunze kwekombuta yangu kumba… Isa iri mubhavhu… Uye ita shuwa kuti yapukutwa zvachose.' - Rimuru Dutu
'Ini ndakazvitarisira pasi, asi kwete sekutarisira kwawakaita ini.' - Rimuru Dutu
“Panguva iyi ndaive kudenga. Asi nguva dzinonakidza hadzitore nguva refu. 'Ndiwo mamiriro akaita hupenyu.' - Rimuru Dutu
“Zorora zviri nyore. Ndichadya zvivi zvako zvose pamwechete newe. ” - Rimuru Dutu
“Zvinoita sekunge vari kunakidzwa. Pamwe ndaifanira kunge ndakaenda kudivi iro. Pano ndipo panongori… dhara rekare. ” - Rimuru Dutu
“Vanhu vanogara nemapoka. Ukasangana navo, vanogona kutsiva nenzira hombe. Uye kana vakauya shure kwedu nemoyo wese, ndinofungidzira kuti taigona kuvabata. Kunze kwezvo, kuwirirana kunotibatsira munzira dzakawanda, zvakadaro. ” - Rimuru Dutu
'Zvakanaka, mese mave kusimba nekuchinja, handiti? Zvinoreva kuti haufanire kurega izvo zvichisvika kumusoro wako uye nekusundira marudzi asina kusimba kutenderedza. Usaite chikanganiso chekufunga kuti uri nani kupfuura ivo. Haudi kuti vazvisimbise uye vadzore rimwe zuva, handiti? ' - Rimuru Dutu
'Hapana akafa, saka tichati zvese zvakanaka.' - Rimuru Dutu
“MaLizardmen achagoverana sosi yemvura yakachena nehove, vanaGoblin vachapa nzvimbo dzekugara, uye guta redu richavapa zvinhu zvakagadziriswa. Uye mukudzoka, maOrcs achapa basa. Marudzi ese eGreat Sango reJura achaumba mubatanidzwa uye anovaka hukama pamwe chete. Zvingatonhorere chaizvo kana tikakwanisa kugadzira nyika inokwana madzinza ese! ' - Rimuru Dutu
“Kune wese munhu akatipikisa, isu tichabereka mazino edu uye tinotsiva. Kune wese anokweretesa maoko ake kwatiri, tinozopa ropafadzo yedu kwavari. Kune vatinopikisana navo, isu tichavaitira ivo izvo zvavakatiitira. Mune ramangwana, ndinotarisira kuti rimwe zuva tichazobatanidzwawo muushamwari. ” - Rimuru Dutu
chakanakisa chidimbu chehupenyu anime 2019
'Munyika ino, zvinodyiwa kana kudyiwa.' - Rimuru Dutu
“Uh-huh. Ndinoona, ndinoona. Izvi zvingava sei?! Ini ndaive murume anopisa, murume, asi ikozvino ndatora iyi yakanatswa, yakarongedzwa fomu! Ehe, kurudyi, benzi! Kufanana negehena ndinogona kuzvigamuchira! Asi… ndiri mutobvu handiti? ” - Rimuru Dutu
“Ndinzwei, Madhiri! Mukuru wako Akafa! Ndichakupa sarudzo: tumira pasi kana kufa! ' - Rimuru Dutu
'Ndinoda kuita ino nyika ive iyo munhu wese anogona kugara murunyararo, futi.' - Rimuru Dutu
'Zvinogona kutaridza serumwe rudzi rwehope, asi ndiri kufunga kuti tese tinogona kushanda pamwe chete.' - Rimuru Dutu
“Ukangosiya, zvapera. Saka iwe unofanirwa kuita zvaunogona. Usatarise tariro yako. ' - Rimuru Dutu
' Zvakawanda zvakaitika… Asi ikozvino nyaya iyi yakavharwa. Matambudziko edu ese akagadziriswa. Shizu-san, izvi ndezvepamusoro, handiti? ” - Rimuru Dutu
34 Yeiyo Inonyanya Kufadza Bvudzi Bvudzi Bvudzi Anime Vasikana Vakambosikwa
Iwo ma16+ Akanakisa Grey Fullbuster Makotesheni Anomira Iyo Bvunzo YeNguva!
yakanyanya anime nguva dzese
simba ndicho chinhu chega chine basa munyika ino
chidimbu chehupenyu anime echirungu dub